Io marina tokoa aloha no misy e ! Marina ny azy. Manjifa amin’ilay vidiny teo aloha, hono, izay tsy faly e ! Angaha moa misy tsy faly izany eto raha tsy tapa-tsinay fotsiny. Ariary zato kosa ve rangahy no niadivana nandritra ny 3 andro ? Arahabaina aloha fa ianareo irery no mpitarika nahavita an’izany teto ambonin’ny tany e ! Tena faly mihitsy izahay fa tsy hoe hividy amin’ny vidiny teo aloha izany ka ! Ny angatahanay aminao fotsiny dia tandremo ary sao midangana tampoka eo afaka 2 na 3 volana a !